Jadwalkii Geeridii ku Timid Dr. Cali Khalif Galydh | Baligubadlemedia.com
Jadwalkii Geeridii ku Timid Dr. Cali Khalif Galydh
Badhtamihii September, 2020 – Togwajale ayay Salaadiin rer-Jigjiga ahi Dr. Cali ka soo qaadeen waxana la dajiyey Jigjijga Internation Hotel
September 24, 2020 – Qado sharf ONLF u samaysay & Sawiro uu la galay Gudoomiyaha iyo Wasiirada Itoobiya Filsan.
September 29, 2020, October 2 Faysal Cabdi Roolbe oo Telephone ku la hadlay – waxana isku xidhay cadre ka mid ah ONLF – waxa uu ka dayrinayey madaxda Soomaaliland. Isla maalin ka hore waxa Hargaisa gaadhay wafdi uu hogaaminayo Dr. Xussen Xaashi.
October 2, Wareysi adag uu siiyey NABAD TV (waa TV ka madax banaan DDS).
October 4-7, xanuun la yidhii cunto sumow ayaa la inoo sheegay.
October 6, nin maraykanka ka yimid oo M/W Mustafa xidhiidh leeyihinn ayaa laga codsaday in uu Madaxweynaha u sheego in Dr. Cali il daranyahay, xanuunka uga sii darayo. Xataa dadkii ka keenay Wajaale wey ka gaabsadeen soo eegistiisa.
October 7, M/W mar ala markii loo sheegay amar bixiyey in daarada Qaryaan Dhoonaan meel looga diyaariyo Marxuunka
Ocober 7, isla markii amarkaasi baxay, Xasan Dhaadi ayaa u xaqiijiyey una sheegay muwaadinkii MW Mustafa xidhiidhka la haayeen in Dr. Cali Khalif lagayn doono Qol ku yaal daarada Qaryaan Dhoodaan.